Bixiyeyaashaada Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka waxay aaminsan yihiin in jimicsiga xilliga uurka uu adiga kuu fiican yahay. Sababtoo ah waan ognahay dhammaan faahfaahinta taariikhdaada iyo xaaladdaada hadda, weydii haddii barnaamijka jimicsiga ee hadda jira uu ku habboon yahay uurka oo uu ku habboon yahay qaab nololeedkaaga oo uu xaq u leeyahay ilmahaaga. Jimicsiga xilliga uurka ayaa kaa caawin doona inaad hagaajiso murqaha muruqyada iyo adkeysiga, kuwaas oo kaa caawin kara qolka dhalmada.
Jimicsiga ugu yaraan saddex jeer usbuucii wuxuu hagaajinayaa murqahaaga iyo istaagaaga, laakiin sidoo kale waa inaad dhageysataa jirkaaga. Dhakhtarka jimicsiga jimicsiga ayaa kaa caawin kara inaad go'aamiso waxa ku jira xadkaaga.
Waad suuli kartaa, dabaalan kartaa oo aad sameyn kartaa dhaqdhaqaaq jimicsi, laakiin waa inaadan waligaa jimicsi ku daalin. Intaad socotid, qoob-ka-ciyaareyso ama aad baaskiil wadid wado, waa inaad awood u yeelatid inaad wadahadal sii wadatid inta aad jimicsiga sameyneyso. Waa inaad biyo badan cabtaa iskana ilaalisaa inuu kululaado.
Waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad ka fogaato laylisyada u baahan saxnaanta, dheelitirka iyo isku-duwidda. Jimicsiyadaada culeyska qaadaya waa in la yareeyaa. Saddexda bilood ee ugu horreeya ka dib, iska ilaali jimicsiyada u baahan inaad dhabarka u jiifto. Marka uurkaagu sii socdo, yaree heerka jimicsigaaga. Tusaale ahaan, haddii aad tahay orodyahan, u beddel socodka bil ka hor dhalmada.
Tilmaamaha kale waxaa ka mid ah:
Diirimaad ka hor jimicsiga.
Is-qabooji oo kala bixi ka dib.
Samee jimicsi laga bilaabo 20 daqiiqo illaa 1 saac, iyadoo kuxiran xoogga. Jimicsiga dhexdhexaadka ahi waa inuusan ka badnaan 30 daqiiqo.
Beddel dareeraha ka hor, inta lagu jiro iyo ka dib jimicsiga.
Kordhi qaadashada kalooriga si aad u beddesho kalooriyada gubtay inta aad jimicsiga sameyneyso.
Xidho rajabeeto taageero iyo kabo.
Jooji jimicsiga isla markiiba haddii aad leedahay neefsasho, dawakhaad, kabuubyo, calool xanuun iyo casiraad, dhiig bax ama garaaca wadnaha oo degdeg ah.
Haweenka leh arrimo qatar ah oo u horseedaya foosha degdegga ah waxaa laga yaabaa inay si aad ah u xaddidaan waxqabadkooda inta lagu jiro qeybta dambe ee uurka.
Nasasho Maalinle ah
Nasashada ayaa si isku mid ah muhiim ugu ah caafimaadkaaga. Inta lagu jiro nuska labaad ee uurka, waxaan kugula talineynaa inaad u nasaneyso dhinaca bidix saacad maalin kasta, ha ahaato waqtiga qadada ama shaqada kadib. Tani waxay kordhisaa socodka dhiigga ee ilmahaaga iyo kelyahaaga.
Dr. Alexandra Schueler Dr. Lauren Sagaria Dr. Erika Boothman Dr. Amy W. Rahl Dr. Carrie Soder Dr. Joanna Buell Dr. Kevin Hackett Dr. Ann Marie Wurst Goobta Westerville Goobta Dublin Goobta Columbus Nafaqada & Jimicsiga